रिघामा रु १ अर्व ८८ करोडको लागतमा ९.६ मेगावाटको जलविद्युत परियोजनाको निर्माण हुने ! – ebaglung.com
रिघामा रु १ अर्व ८८ करोडको लागतमा ९.६ मेगावाटको जलविद्युत परियोजनाको निर्माण हुने !
२०७४ चैत्र ९, शुक्रबार १८:१३	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७४ चैत ९ । रिघामा ९ दशमलब ६ मेगावाट क्षमताको जलबिद्युत परियोजना निर्माण हुने भएको छ । दरमखोला हाईड्रो ईनर्जी कम्पनी प्राईभेट लिमिटेडको १ अर्व ८८ करोडको लागतमा दरमखोलामा निर्माण गरिने भएको हो । गल्कोट नगरपालिका वडा नं ११ रिघामा कम्पनीले आज एक कार्यक्रमका बिच परियोजना निर्माण सम्बन्धि जानकारी गराएको वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर श्रीसले ईबागलुङलाई बताए । निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष निरज पुनले योजना निर्माण सम्बन्धि गतिबिधि र निर्माण कार्यका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा परियोजना निर्माणका लागी एक ब्यक्ति बराबर २० लाखसम्म सेयर राख्न सकिने जानकारी गराईएको थियो । परियोजना निर्माणका लागी टेन्डर खुलाएर काम समेत अगाडि बढाईएकाले करिब २ बर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना रहेको निर्माण समितिका सदस्य नर बहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा गल्कोट नगरपालिका र गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका भित्रका जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, उपभोक्ता, स्थानिय लगायतको व्यापक उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यक्रममा मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटा, नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम न्यौपाने, मुसिकोट नगरपालिका ७ का अध्यक्ष प्रकाश काफ्ले, ८ का अध्यक्ष नारायण सापकोटा, ९ का अध्यक्ष नरेश खरेल, कार्यपालिका सदस्य हरि प्रसाद छन्त्याल, मुसिकोट नगरपालिकाका समाजसेवी जीवन खराल, गल्कोट नगरपालिका ८ का अध्यक्ष रामप्रसाद कडेल, ९ का अध्यक्ष तेज बहादुर थापा त्रिलोक, ११ का अध्यक्ष डम्बर श्रीस, रिघा गाबिसका पुर्व अध्यक्ष बाबुराम नेपाली, गल्कोट माद्यमिक बिद्यालयका प्रध्यानाध्यापक देबेन्द्र खत्री, जनजागृति माद्यामिक बिद्यालयका प्रध्यानाध्यापक तेजिन्द्र बुढाथोकीे लगायतले आआफ्नो मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरुले स्थानिय उपभोक्ता र निर्माण कन्पनी सँग सहकार्य गर्दै मुख्य प्रभाबित समुदाय र उपभोक्ता सँग सहकार्य गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पश्चिम बागलुङकै ठुलो योजना भएका कारण सबैको सहयोग अपरिहार्य भएको परियोजनाले जनाएको छ ।
कार्यक्रम परियोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष नर बहादुर पुन निरजको अध्यक्षता र वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर श्रीसको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।